Ny dikany samihafa mifangaro amin'ny chimie
Ao amin'ny simia dia misy famaritana telo mety amin'ny teny hoe "konjugate".
1) Ny conjugate dia manondro ny fitambaran-tsolika mifamatotra amin'ny fidirana roa na mihoatra.
(2) Ao amin'ny teorinan'ny Bronsted-Lowry ny asidra sy ny bas , ny teny hoe conjugate dia midika hoe asidra sy fototra izay samy hafa noho ny proton. Rehefa mihetsika ny asidra sy ny fotony dia mamorona ny fototra mifangaro ny asidany rehefa mamorona asidra izy:
Ho an'ny HA asidra, dia mitovy ny voasoratra:
Ny pikantsarin'ny fisehoan-javatra dia hita fa havela sy marina satria ny fihetseham-po amin'ny fifanoherana dia mitranga eo amin'ny làlana mankany amin'ny famolavolana ny vokatra sy ny làlana mankany amin'ny famerenana ny vokatra hiverenan'ny mpikatroka. Ny sira dia mamotika ny proton mba ho lasa ny konjugate fototra A - satria ny base B dia manaiky ny proton mba ho toy ny asy konjugate HB + .
(3) Ny fitanisana dia ny fihanaky ny p-orbitaly amin'ny alalan'ny sanda ( sigma ). Amin'ny metan'ny fifandimbiasana dia mety handresy ny d-orbitals. Ny orbitaly dia nanala ny elektônôma rehefa misy fifamatorana tokana sy fifandanjana amin'ny molekiola. Ny fatorana dia manova amin'ny rojo iray raha mbola misy p-orbital misy ny atoma tsirairay. Ny famaritana dia mampihena ny herin'ny molekiola ary mampitombo ny fahamendrehany.
Ny fitenenana dia mahazatra amin'ny fitantanana polymers, carbon nanotubules, grains, ary graphite.
Hita amin'ny molekiolan'ny organika maro izany. Amin'ny fampiharana hafa, ny rafitra mifangaro dia afaka mamorona rafitra. Ny chromophores dia molekiola izay afaka mitandrina ny fahazavana sasany amin'ny hazavana, izay mitondra azy ireo ho miloko. Hita ao anaty loko ny chromophores, ireo mpaka sary amin'ny maso, ary mamirapiratra ao anaty pigmatika.
Ny lalàn'i Graham ohatra
Inona avy ny Lalàn'ny Motion Newton?
Famaritana subshell (Electron)
Famaritana ny isam-bolana
Famaritana ny cellule electrolysique
Fanehoan-kevitra momba ny fihodinana am-bava sy ohatra
Fanamboarana fanovàna ny famaritana
HARVEY - Ny dikany sy ny fiaviany
Tantara momba ny sidina: Ireo Wright Brothers
Ahoana ny fomba hampianarana ny fepetra
Volo mavo sy volom-bolamena ho an'ny tranonao
Tsy voan'ny fanolanana fa ny sisa velona amin'ny fanolanana, Fizarana I - Ny tantaran'i Renee DeVesty
Inona ny JavaFX?
Ny fanjakana Mississippi - GPA sy ny tatitra momba ny fidiram-bola
Memes mahatsikaiky momba ny Conservative
Ny tantaran'ny fankalazana Kristiana amin'ny Paka
Ny fomba ahafahan'i Kirpans mandeha amin'ny fiaramanidina
Nahoana no tsy mihena ny vidin-tsolika mandritra ny fitakiana?
Ny tranokalan'ny tranokalan'ny sekoly iray dia mahatonga ny fahatsapana voalohany
Samuel L Jackson Niresaka momba ny "Black Snake Moan"
Resaka momba ny biolojika ho an'ny mpianatra
Inona avy ny masera?
Ahoana no nahatonga ny ethanol?
Online Textbook Online Microeconomics
Ny tantaran'ny Computer Laptop
Inona no lalàna mifehy ny ririnina?
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fiarovan-tena
Mianara manao ahoana no hanatsarana ny fahaiza-manao ara-gymnastics
Inona no famonoana ahy tamin'ny Lai?
Strategie Deep Stack Poker Tournoi - 100+ Big Jaws
'Vilja Lied' Lyrics, Fandikan-teny Anglisy, ary Recordings Recordings
Mianara ny ampahan'ny trompetra